झपेन्द्रराज वैद्य | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Tuesday, 27 October, 2020
बिपनामै आउँछ सपना access_timeसाउन २१, २०७७
बिपनामै हुन्छ सपना लक्ष्य, विचार र सङ्कल्प शिल्प, सौन्दर्य र विद्रुप पसिना र रक्तमयली बिपनामा खुल्छ । अतिरञ्जित, विसर्जन र ढुलमुल गरे आदर्श मरेर जान्छ अवसरवाद र शून्यवाद विचारमा दरिद्र भएरै हुन्छ । विचार छाडे के हुँदैन ? दरबार बन्छ, घरबार बन्छ । तर दूरी बढ्छ...
कथा : सुल्फा सुल्फेनी access_timeभदौ १, २०७६
साधारणतया सुल्फा भन्नाले पहाडी क्षेत्रमा कक्ड खाने माटाको एउटा साधन बुझिन्छ । प्युठानको एउटा ऐतिहासिक ठाउँ रातामाटामा यस कथाका एउटा पात्रले कक्कड (भुसा, तमाखु) हर्दम खाइरहने हुँदा गाउँलेहरुले उसको नाम सुल्फा राखेका हुन् । यसै गरी उसकी बुढीलाई भनियो सुल्फेनी । ती...
गणतन्त्र आयो तर सँस्कार आएन access_timeसाउन ३२, २०७६
गणतन्त्र आयो तर सँस्कार आएन लोकतन्त्र आयो खै कता कता आयो? लोकतन्त्रमा जनता बोल्छ ,सरकार सुन्छ। यहाँ त सरकार बोल्छ जनता सुन्छ। बोल्दा मुखछोप्नुपर्ने अनि लेख्दा कलम भाँच्नुपर्ने पत्रकारीता चौथो अंग कि ...
रिभाइभ प्रेस मिडिया ! access_timeसाउन ११, २०७६
प्रेस र मिडिया पार्टीभन्दा माथि छन् । सत्य, तथ्य लेख्न पार्टी र आस्थाले नियन्त्रण गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य आस्थाले सत्ताधारी नेकपाको निकट हुनुहुन्छ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ । यस माने...
म कहाँ जन्मेँ म कहाँ आएँ access_timeजेठ २३, २०७६
म रक्तरञ्जित थिएँ छटपटिएको थिएँ एकदम कोलाहल जताततै कोलाहल आमाको प्रसव वेदनामा जमँदै विद्रोही स्वभाव मेरो बलियाले निर्धोलाई निमोठेको देखेँ खेतमा जाँदा बलियाको भागमा ठूलै पानी देखेँ घाँस दाउरा गर्दा पहिले बलियाकै भारी देखेँ, गोठाला जाँदा घा...
दुई तिहाइ सरकार र वर्तमान सङ्कट access_timeबैशाख १६, २०७६
दस वर्षे जनयुद्धले थिलथिलो भएको नेपाल बल्लतल्ल तङ्ग्रिँदै छ । नेपालले अब त्यस्तो दुर्घटना थेग्न सक्दैन । तर पनि फेरि त्यस्तै खलाको युद्धको शिकार हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भनेजस्तै राज्य र विद्रोही बीचको हुनथालेको सम्भावित मुठभेडले ...
दलाल पुँजीवादबाट समृद्धि असम्भव access_timeकात्तिक १४, २०७५
नेपालको सांस्कृतिक विविधता, भूबनोट, प्रकृति हिमाल र तराई, पहाड, बेँसी, हवापानी, नदीनाला आदिका कारण विश्वमा नै नेपाल अनौठो छ । विश्वका दस सहरहरूमध्ये काठमाडौँ उपत्यकालाई एउटा अनौठो मनोहर र सभ्यता तथा संस्कृतिको सहर मानिएको छ । यसलाई विश्वले आँखा लगाएको छ । चीनको...
प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत त्यागे मात्र वार्ता access_timeअसोज १९, २०७५
वार्ताको चाहना सबैमा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । तर केका लागि वार्ता भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारले ने.क.पा. विप्लव माओवादीसँग वार्ताको पासा फालेको छ । आफैमा यो राम्रो कुरा हो । तर वार्ता रणभुल्ल र अन्योल छ । दक्षिणी ध्रुव र उत्तरी ध्रुवको मेल हुनस...
साम्राज्यवादबाट माओवाद निस्तेज पार्ने खेल access_timeअसोज ९, २०७५
पर्यवेक्षक र राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्–चीनमा नेपालको नाका नखुलोस् भन्ने धारणा भारतको छ । रसुवागढी हुँदै चीनबाट काठमाडौँमा रेल आउने चर्चाले भारतीय सत्ताको मुटु खाएको छ । ओली सरकारले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन रेलको हौवा दिए पनि यसबाट भारत तर्सेको छ । ...
फेरि पनि जनतालाई सास्ती access_timeसाउन २०, २०७५
फसीवाद, तानाशाह, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद एकअर्कामा परिपूरक पर्यायवाची शब्द हुन् । सारमा जनताको मौलिक हक निस्तेज पार्ने साधन हो– फासीवाद वा तानाशाह । जर्मनीमा हिटलरले फसीवाद चलाएका थिए । फ्रान्समा सम्राट नेपोलियन तृतीयले ‘म नै राज्य हुँ’...
सामाजिक फासिजम दलालहरूको संयन्त्र access_timeअसार २५, २०७५
आलोचना आलोचनाकै लागि हुनुहुँदैन । विनाकारण आरोप प्रत्यारोप गर्न पनि सुहाउँदैन । लेखक पत्रकारहरूले वस्तुगत जे छ त्यही पस्कनुपर्छ । बजार होटल पसलहरूमा सरकारबाट फासिवादको डण्डा सोझ्याएको कुरा चलेको छ । मानव अधिकारमा दण्डहीनता हुनुहुँदैन । तर हाल नेपालमा केपी ओ...
भारतीय हस्तक्षेप एक प्रमुख चुनौती access_timeबैशाख २५, २०७५
नेपाल र भारत असल छिमेकी हुन् । यसमा कुनै शङ्का छैन । कला, साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, प्रवृत्ति र वृत्तिमा पनि दुवै देश समान छन् । नागरिक समान छन् । बिहेवारी चल्छ । हिन्दूधर्ममा विश्वास राख्नेहरूमा तिहार रक्षाबन्धन इत्यादि चाडपर्वहरू समानरूपमा मानिन्छन् । खुला ...
ओलीको रारा भ्रमण र सपनाको खेती access_timeबैशाख १६, २०७५
मुगुको अनुपम दृश्य हो राराताल । नव वर्ष २०७५ वैशाख १ गते सूर्योदयको लाल किरणसँगै राराको डिलमा बसेर प्र.म. केपी ओलीले सम्बोधन गरेका हुन् । त्यहाँबाट समृद्धि र विकासका लड्डु सबैलाई बाँडे । यो हो ओलीको सपनाको खेती । सपना त हुनुपर्छ । त्यसलाई पूरा गर्न दृढ विश्वास, सङ्क...
नर्कको यात्रा, लुटको स्वर्ग, विलयको गठबन्धन access_timeअसोज २३, २०७४
यही आश्विन १७ गते एमाले र माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता र निर्वाचनमा तालमेल हुने घोषणाले बजार निकै तताएको छ । चिया पसल, बजार र गल्लीहरूमा एकीकरणको तातो हवा निकै चलेको छ । जङ्गली भनिएको माओवादी र राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्षमा ठेलागाडीबाट अमेरिका...
सौन्दर्यताको यात्रामा लेखकको महत्व access_timeअसोज ४, २०७४
वास्तवमा सौन्दर्यता मानिसको भावना र हृदयसँग जोडिएको हुन्छ । जुन उपयोगी हुन्छ, त्यही नै सुन्दर हुन्छ । वर्गको उदय भएदेखि नै भावनात्मक सौन्दर्याका दुईवटा पक्षहरू देखापरेका हुन्छन् । शोषक वर्गीय पक्ष र शोषित वर्गीय पक्ष । सचेत वा अचेत रूपमा सौन्दर्यकर्मीहरू कुनै न कुनै व...
दलाल पुँजीवादको दुन्दुभी access_timeअसार २८, २०७४
राष्ट्रियताको सवालमा देश अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । यसैमा जनतन्त्र, स्वाधीनता र जनजीविका पनि जोडिएको अवस्था छ । नेपालको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादको चलखेल पहिल्यैदेखि रहँदै आएको छ । अहिले प्रचूर मात्रामा छ । चलखेलको अवस्था बदलिएको छ । विस्तारवादले सीधै हस्तक्षेप ग...